UMnu Abd-semii‘ Oluwatosin-Enitan Owolabi ophuma eSikoleni Sezibalo, Izibalomidanti neziFundo Zekhompyutha.
Owenza Ezobudokotela Kwezezibalo Uthole Umklomelo Waphesheya
UMnu Abd-semii' Oluwatosin-Enitan Owolabi, owenza iziqu zobudokotela eSikoleni Sezibalo, Izibalomidanti neziFundo Zekhompyutha (i-SMSCS) uklonyeliswe nge-International Mathematical Union (i-IMU) Breakout Graduate Fellowship Award, waba ngomunye wabathathu abenza iziqu zobudokotela kwezezibalo abaklonyeliswe.
Ucwaningo luka-Owolabi, abelulekwa nguSolwazi Oluwatosin Tope Mewomo kulona, lugxile ekubhekeni indaba ye-split generalised mixed equilibrium, i-monotone inclusion ne-fixed point problem in Hilbert and Banach spaces. U-Owolabi ufisa ukuthola okusha, aphucule nolwazi olukhona ngalendima, okwenze lesisihloko esingakaze sibhekwe ngabacwaningi abaningi.
Loluhlelo lokwenza ucwaningi lwe-IMU lweseka abacwaningi abenza iziqu zobudokotela kanti lungenxa yeminikelo yabanqobe i-Breakthrough Prize in Mathematics, besizwa yi-IMU ne-Friends of IMU. Ibona abafundi abanesifiso esikhulu futhi abanethalente abahlose ukwenza umsebenzi wokucwaninga nokufundisa izibalo, ngaleyo ndlela bandise izinzuzo zeFellowship emazweni abo asekhaya.
U-Owolabi ungumfundi wezobudokotela wesibili owelulekwa ngu-Mewomo ukuthola lomklomelo ngokuqokwa yilowo omeluleka ngocwaningo. Esokuqala kwakunguDkt Adeolu Taiwo, ongumcwaningi e-Technion - Israel Institute of Technology.
‘Ngiyaziqhenya ngabafundi bami bezobudokotela ababili ngokuthola loMklomelo,’ kusho u-Mewomo. ‘Impela, yinto enkulu lena eSikoleni naseKolishi leZolimo, Ezobunjiniyeka neSayensi ne-UKZN.’
‘Ngijabule kakhulu ukuthola lomklomelo ohlonishwayo noyinyama,’ kusho u-Owolabi. ‘Kuyangilekelela ngezifiso zami.’ Wengeze ngokuthi lomklomelo wenza abacwaningi abavelele bakwazi ukuthi ucwaningo lwabo lwaziwe, kwaziwe isayensi yezibalo eyinsika ekuthuthukiseni isayensi nobuchwepheshe e-Afrika.
U-Owolabi waphasa iziqu zakhe zokuqala ngamalengiso kwelakubo, eNigeria, e-University of Ilorin, ngaphambi kokwenza iMastazi e-UKZN, ehehwa yigama elihle lokuba ngenye yezikhungo ezivele ezwekazini namathuba okulekelela ngokufunda nokweseka abafundi abenza ucwaningo. IMastazi wayiphasa ngamalengiso u-summa cum laude.
Ngemva kokuqeda iziqu zobudokotela, u-Owolabi uhlose ukufundisa ukuthuthukisa ikhono lakhe lomsebenzi namakhono okucwaninga, agcine esengusolwazi emkhakheni wakhe esikhungweni esigxile ocwaningweni. Ufisa ukuphosa esivivaneni sokuthuthukisa izibalo emphakathi, adlulise ulwazi ezifundweni zakhe.
U-Owolabi ubonge abazali bakhe, umkakhe, izingane zakubo ngokumeseka nokumkhuthaza, wabonga uMewomo ngokumeseka ezifundweni zakhe zocwaningo.
I-UKZN Izokwenza I-25th Poetry Africa Festival
Umfundi Wakudala Ulale Isibili kwi-Unisa National Strings Competition
Umfundi WezeMfundo Wethule Inoveli Ephakamisa Amaphaphu
Isifundo Sokuqala Sibheka Ubumqoka Bokucabangisa Okwekhompiyutha Esikhathini Sanamuhla